गाउँकै नातिनी नाता पर्ने ११ वर्षिय बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुकुमले एक वृद्धलाई ८ वर्ष कैद र ५० हजार क्षतिपुर्ति तिर्ने फैसला गरेको छ। खारा गाविस वडा नं. १ बस्ने ८२ वर्षिया शिवराम खड्काले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको अदालतका श्रेस्तादार तेजप्रसाद शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्ला न्यायाधिस डण्डपाणी शर्माको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। खड्काले घरमा कोही नभएको मौका छोपी बालिकालाई २०७३ भदौ २२ गते जबर्जस्ती करणी गरेका थिए। दोषीलाई कानुनी कारवाहीको फैसला पाएपछि पीडितका आफन्तहरुहरु पनि खुशी हुने र यस्ता फैसलाले बलात्कारका घटना रोक्न सहयोग पुग्ने महिला अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्। तर यस फैसला कार्यन्यनमा आउन भने पुनरबेदन अदालतबाट सदर हुनुपर्ने अदालत रुकुमले जानकारी दिएको छ। जबर्जस्ती करणीको मुद्धा फैसलामा अवस्थामा १० देखि १५ वर्ष सम्म कैद सजाय हुने भएपनि खड्काको उमेर हदका ८ वर्ष मात्र कैद सजाय भएको हो।
गाउँकै नातिनी नाता पर्ने ११ वर्षिय बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुकुमले एक वृद्धलाई ८ वर्ष कैद र ५० हजार क्षतिपुर्ति तिर्ने फैसला गरेको छ। खारा गाविस वडा नं. १ बस्ने ८२ वर्षिया शिवराम खड्काले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको अदालतका श्रेस्तादार तेजप्रसाद शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्ला न्यायाधिस